Google ga-aga n'ihu ịhapụ nsụgharị dị ọnụ ala nke ọdịnihu ọkọlọtọ Pixel | Gam akporosis
Google ga-aga n'ihu ịhapụ nsụgharị dị ala nke ọdịnihu pixel Pixel
Google mara ọkwa ụnyaahụ na Pixel 3a na Pixel 3a XL na Day 1 nke Google I / O. nke afọ a. Ngwaọrụ abụọ a bụ smartphones dị ọnụ ala Google wepụtara kemgbe ọ dọrọ Nexus akara maka akara Pixel afọ ole na ole gara aga. Ozi ọma ahụ bụ na ha agaghị abụ ndị ikpeazụ.
Dị ka akụkọ sitere na Ndị uwe ojii, Pixel 3a smartphones abụghị ngwaọrụ 'otu-nke-ụdị'. Atụmatụ Google bụ ịnọgide na-ewepụta nsụgharị ọnụ nke pixel smartphones ya maka "ọdịnihu n'ọdịnihu."
Enweghi nkwenye na njedebe ndị a ga-enweta njupụta 'a' ('Pixel 4a' na 'Pixel 5a', dịka ọmụmaatụ), mana ha ga-eme. Ngagharị ahụ ga-abụkwara Google mmeri, n'ụzọ. Kama ichere otu afọ tupu ekwuputa ekwentị Pixel na-esote, nnukwu ụlọ ọrụ ga-enwe nnukwu ekwentị abụọ kwa afọ, si otú a na-edebe ha na akụkọ, ebe mbinye aka mgbe ụfọdụ na-apụ n'anya.
Pixel 3a na Pixel 3a XL
Agbanyeghị, enwere nchegbu na mkpebi ịmepe ụdị ọnụahịa nke ọkọlọtọ ga-emetụta ire ahịa nke isi ma ọ bụ ọkọlọtọ. Nyere ụdịdị dị ọnụ ala nwere ike ịnwe ụfọdụ atụmatụ dị mkpa nke nnukwu ọkọlọtọ, ndị mmadụ nwere ike ikpebi idozi ha. N'agbanyeghị nke ahụ, Google agaghị eche banyere nke a ma ọ bụrụhaala na ekwentị ha na-ere.
Anyị na-echekwa na ọdịiche dị n'etiti ekwentị abụọ ahụ nwere ike ịgbasa, mana Google ga-eche onye ga-anọchi Pixel 3a n'ụzọ ga-abụ nke kachasị mma na klaasị ya.
Nke ọ bụla, nke a ghọrọ ihe dị mma maka ndị ahịa, nwere ụdị dị ọnụ ala karịa nke ụdị arụmọrụ dị elu. Willdị dịgasị iche iche ga-enwe ekele mgbe niile, ma ọ bụrụ na Google chọrọ ịdọta uche ndị ọzọ, ọ ga-adị mkpa ka ịchekwa akwụkwọ nchịkọta ngwaahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google ga-aga n'ihu ịhapụ nsụgharị dị ala nke ọdịnihu pixel Pixel
Ihe karịrị 10% nke ekwentị nwere gam akporo